Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Hametraka ozinina goavana eto i Sina -
AccueilSosialyFiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Hametraka ozinina goavana eto i Sina
Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Hametraka ozinina goavana eto i Sina
25/11/2017 admintriatra Sosialy 0
Tontosa omaly, tetsy amin’ny Hotel Colbert, Antaninarenina, ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa eo amin’ny orinasam-panjakana sinoa SDOC sy ny Fanjakana malagasy tamin’ny alalan’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ary ny Fampitaovana (M2PATE) sy ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN), ary ny Sonapar (Société Nationale de Participation).
Mifototra indrindra amin’ny fanorenan’ity orinasam-panjakana sinoa ity ozinina goavana mpamokatra “drone” eto Madagasikara ity fifanaovan-tsonia ity. Raha ny fanazavana, dia efa orinasa matihanina amin’ny famokarana ireny “drone” ireny ny SDOC. Nanamboatra ny maodely BY-100 izy ireo izay mahatratra 120 km/h ny hafainganam-pandehany, ary mahatratra ora telo ny faharetan’ny fanidinany. Nalaina tamin’ny modely manara-penitra sy maneran-tany izy io. Taorian’izay kosa namokatra ny “drone” BY-200 indray, izay mahatody hatrany amin’ny 400 km ary maharitra ora 10 ny fanidinany eny ambony eny.
Voalaza fa amin’ny fivoaran’ny teknôlôjia sy eo amin’ny tontolon’ny fampandrosoana, miasa amin’ny tontolo rehetra ny “drone”, toa ny eo amin’ny tontolon’ny fandriam-pahalemana, ny fanaraha-maso ny lafin-tany, ny fitrandrahana, sns.
Noho izay indrindra, tombony lehibe ho an’ny toekaren’i Madagasikara ny fananganana io ozinina goavana mpamboatra “drone” eto amintsika io. Afaka manondrana izany isika atsy Afrika ka ny “valeurs ajoutées” kosa mijanona ho an’ny Fanjakana malagasy. Tsy vitan’izay fa miteraka asa lehibe sy goavana ho an’ny Malagasy ny fisian’io ozinina eto amintsika io. Eo ihany koa ny fahazoantsika mampiasa ireo “drone” ireo amin’ny lafiny rehetra, sns.
Araka izany, hisy vola miditra ho an’ny Fanjakana malagasy ahafahana mampandroso ny toekarem-pirenena ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena toa an’i Sina.
Ankoatra izay, dia nanazava ny teo anivon’ny Sonapar fa mbola tsy voafaritra mazava kosa ny tetikasam-pananganana io ozinina io, fa ny fifanaovan-tsoniam-pifanarahana aloha no tontosa, ary aorian’izay vao mandeha ny dinika rehetra.
Mitady ny hevitra rehetra hanadiovany tena ingahy Andry Rajoelina. Raha nodradradradrainy tamina haino aman-jery, ary tiany hampitaina amin’ny vahoaka fa tsy tompon’antoka tamin’ireny vonoan’ olona mahatsiravina teto amin’ny firenena ireny ny tenany, tsy afa-miala hatrany ...Tohiny